Vidio: Ọdịnaya na Backlinks | Martech Zone
Vidio: Ọdịnaya na Backlinks
Sunday, October 26, 2008 Fraịde, Ọktọba 17, 2014 Douglas Karr
Ọtụtụ ndị folks na-etinye ma na-ere oge ha na njikarịcha nke weebụsaịtị ha, ma na-agbagha isi ha mgbe saịtị ọzọ nwere ọkwa dị elu mana anaghị edozi. Ọ bụ n'ihi na ịmepụta ọdịnaya bụ naanị ọkara agha, ọ na-adọrọ uche nke saịtị ndị ọzọ na-akpali saịtị gị n'ezie Nsonaazụ Ọchụchọ. Ọrụ nchọta ọrụ ahụ bụ ịnye nsonaazụ dị mkpa. Ọ bụrụ na ọtụtụ saịtị ndị ọzọ a na-akwanyere ùgwù na-atụ gị aka ma na-ekwu, "ị bụ ihe ị bụ!", Englọ Ọrụ Nchọgharị ga-etinyekwu uche na nke ahụ!
Tags: 3ibiaghachinsonaazụ azụmahịacaptchateknụzụ nwere obi ikennapụtaokpokoroTụọ CPrecaptcha
Ndụmọdụ Afọ: Usoro Monroe Na-akpali akpali
Ọkt 28, 2008 na 12:08 PM
Echere m na ọdịnaya dị mma maka m. Akọwara m ihe na nke a, Ebumnuche nke blọọgụ gị bụ ịnweta ọtụtụ ndị ọbịa. Yabụ ị ga-enye ma tinye ọdịnaya dị iche iche dị mkpa nke ndị ọbịa ma ọ bụ ndị na-ekiri mmasị. Ihe omuma di na blog gi di nkpa, ka ezi ihe omuma di nma karie ka saiti ndi ozo gha akpoghachi gi.
A naghị atụ backlink na saịtị gị nke dị mma. Offọdụ weebụsaịtị nwere njikọta na weebụsaịtị ndị ọzọ na - agbanyeghị ma enwere ike ịnweta njupụta pr pr ma ọ bụ pr pr. Fọdụ saịtị ndị ọzọ nwekwara ike iji okpu ojii otu ụzọ njikọ njikọ.
Ndị ọbịa ahụ nwetara mmelite kachasị ọhụrụ ma ọ bụ ozi dị mkpa. Ọkachasị ndị ọbịa leghaara saịtị ndị ahụ anya mgbe ha mepere njikọ ahụ site na backlinked mgbe ha hụrụ na enweghị ọdịnaya dị mkpa ma ọ bụ dị mkpa naanị adịgboroja.